प्रचण्डलाई चुनाव हराउँन नसके आजीवन उनको ड्राइभर बन्ने दुर्गा प्रसाइको घोषणा ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
प्रचण्डलाई चुनाव हराउँन नसके आजीवन उनको ड्राइभर बन्ने दुर्गा प्रसाइको घोषणा !
२ मंसिर, काठमाडौं ।
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज सम्मकै ठुलो च्यालेन्ज दिएका छन् ।
ओटीभी नेपाल डक कम सँगको विशेष कुराकानीमा प्रसाईले आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड र देउवालाई चुनाव हराउँन केपी ओलीनै नचाहीने दुर्गा प्रसाइ नै काफी गरेको जिकिर गरेका छन् । उनले आफु सँग चुनाव लड्न देउवा र प्रचण्डलाई चुनौती समेत दिएका छन् ।
प्रचण्ड र देउवा र माधव नेपाल सबै मिलेर चुनाव लड्न आए आफु नेकपा एमालेको उमेदवारको रुपमा चुनाव लड्न तयार रहेको प्रसाईले बताएका छन् । डडेलधुरा ,चितवन या देशभरको जुनसुकै क्षेत्रबाट आए पनि सामना गर्न तयार रहेको पनि उनले बताएका छन् ।
प्रचण्ड, देउवा र माधव नेपाल प्रति निकै कठोर रुपमा प्रस्तुत भएका प्रसाईले गठबन्धननै गरेर आए पनि उनीहरुलाई चुनाव हराउँन नसके आजीवन उनीहरुको ड्राइभर बनेर सेवा गर्न तयार रहेको पनि उनले बताएका छन् । ‘देउवा ,प्रचण्ड र माधव नेपालको पालैपालो ड्राइभर बनेर आजिवन सेवा गर्छु ल आउ भिड्न।’ प्रसाइले भनेका छन् ।
नेकपा एमाले विभाजन गर्ने माधव कुमार नेपाललाई प्रसाईले गलगाँडको संज्ञा दिएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नाताले हजुरबुवा भन्ने प्रसाइले भनेका छन् ‘मैले केपी ओली हजुरबुवालाई भनिसकेको छु माधव नेपाल जस्ता गलगाँड गएर पार्टी रामो भयो अब पार्टी झन् फ्रेस भएर अघि बढ्छ केहि टेन्सन लिनु पर्दैन’ ।
प्रसाईले आगामी निर्वाचन पछि केपी ओलीनै प्रधानमन्त्री बन्ने पनि जिकिर गरेका छन् । ७० प्रतिशत भन्दा बढि मत ल्याएर आलीको सानदार कमव्याक हुने दावी उनले गरेका छन् । सत्तागठबन्धनको अन्तिम भोज अहिले चलिरहेको भन्दै उनले अब यिनीहरु राजनितीको दर्शक मात्रै हुने ठोकुवा गरेका छन् ।